မိသားစုရဲ့ခွင့်လွှတ်စကားကို ဟာရှော့ဂီရဲ့ ဇနီးလောင်းပယ်ချ
မိသားစုရဲ့ခွင့်လွှတ်စကားကို ဟာရှော့ဂီရဲ့ ဇနီးလောင်...
24 พ.ค. 2563 - 22:41 น.
ဟာရှော့ဂီဟာ တင်ကူးကြံစည်သတ်ဖြတ်တာကို ခံခဲ့ရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာကဖော်ပြ
အသတ်ခံရတဲ့ ဆော်ဒီသတင်းသမား ဂျမားဟာရှော့ဂီရဲ့ဇနီးလောင်းက လူသတ်သမားကို ဘယ်သူမှခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး မရှိဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဟာရှော့ဂီရဲ့ သားက သတ်တဲ့သူတွေကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါပြီလို့ ပြောပြီးနောက်မှာ အခုလို ပြန်လည် တုံ့ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟာရှော့ဂီရဲ့ ဇနီးလောင်း တူရကီနိုင်ငံသား ဟာတီချေချန်ဂေ့က ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူသတ်မှုအတွက် ကာလစည်းကမ်းသတ်ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ တွစ်တာမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီအစိုးရကို ဝေဖန်သူ ဟာရှော့ဂီဟာ တူရကီနိုင်ငံ အီစတန်ဘူလ်မြို့က ဆော်ဒီသံရုံးထဲမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က အသတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟာရှော့ဂီကို သတ်ဖြတ်မှုဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရပ်လို့ ဆော်ဒီအာရေးဗျအစိုးရအရာရှိတွေက ပြောဆိုပြီး အစိုးရကခိုင်းစေတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အဲဒီပြောဆိုချက်ကို တကမ္ဘာလုံးက သံသယရှိကြပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေးဗျတာဝန်ရှိသူတွေကို စစ်ဆေးမေးမြန်းရာမှာ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့တချို့နဲ့ ကုလသမဂ္ဂတို့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဟာရှော့ဂီဟာ အသတ်မခံရခင်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ နေထိုင်ပြီး ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာမှာ သတင်းဆောင်းပါးတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဟာရှော့ဂီသေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖွဲ့တဖွဲ့ရဲ့ စုပေါင်းကြံစည် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်ကြောင်းကို ဆော်ဒီအာဏာပိုင်တွေက အဆုံးမှာ ဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ဟာရှော့ဂီသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမည်မထုတ်ဖော်တဲ့ လူ ၅ ယောက်ကို၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ရီးယာ့ဒ်မြို့တရားရုံးက လျှို့ဝှက်တရားရုံးဖွဲ့ပြီး သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် အဂ္ဂနက်စ် ကာလာမာ့က ဆော်ဒီတရားရုံးစစ်ဆေးမှုဟာ တရားမျှတမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ ဆိုပြီး လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
“ဂျမားဟာရှော့ဂီဟာနိုင်ငံတကာ အမှတ်အသားတခုဖြစ်လာပြီး အများရဲ့ကြည်ညိုလေးစားမှုကို ခံရသူဖြစ်တယ်”လို့ ဟာရှော့ဂီရဲ့ ဇနီးလောင်း ဟာတီချေချန်ဂေ့က ဆိုပါတယ်။
“ဂျမားဟာ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားရဖို့ သူ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ သံရုံးကိုသွားစဥ်မှာ အသတ်ခံရတာပါ။သတ်ဖြတ်သူတွေဟာ ဆော်ဒီအာရေးဗျကလာပြီး ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုတင်ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်”လို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။
ဆော်ဒီနိုင်ငံ ဂျေဒါ့မြို့မှာ နေတဲ့ ဟာရှော့ခီရဲ့သား ဆလားဟာရှော့ခီကတွစ်တာမှာ ရေးသားခဲ့ရာမှာ မြင့်မြတ်တဲ့ ဥပုသ်လရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ညမှာ ဘုရားရှင်ပြောစကားဖြစ်တဲ့ လူတယောက်ကို ခွင့်လွှတ် ကြေအေးပေးရင် ထာဝရဘုရားရဲ့ဆုမွန်ကို ရရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကို အမှတ်ရမိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အာဇနည်ဟာရှော့ဂီရဲ့သားတွေက သတ်ဖြတ်သူတွေကို ခွင့်လွှတ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဥပဒေအရ ခံရသူကခွင့်လွှတ်ရင် သေဒဏ်ကို လျှော့ပေါ့ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအမှုအတွက် အကျုံးဝင်မဝင်တော့ မရှင်းလင်းပါဘူး။
သားဖြစ်သူဆာလာဟာ ဆော်ဒီအစိုးရရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ယုံကြည်ကြောင်းလည်း အရင်က ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။သူ့အဖေအသတ်ခံရမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဆော်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကို သိက္ခာချချင်တဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗျရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် ရန်သူတွေဆိုပြီးလည်း သူဟာ အရင်က ဝေဖန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ခါရှော့ဂီအသတ်ခံရတဲ့ အတွက် သားသမီးတွေကို အိမ်နဲ့ လစဥ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေ လျော်ကြေးရရှိခဲ့တယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဟာရှော့ဂီရဲ့ အကြီးဆုံးသား ဆာလား တယောက်သာ ဆော်ဒီအာရေးဗျမှာ ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်း သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်ကစပြီး ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ပြည်ပထွက်ခွာခဲ့တဲ့ သတင်းစာဆရာ ဂျမားဟာရှော့ဂီဟာ ဟာတီချေချန်ဂီနဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာတူရကီနိုင်ငံ အီစတန်ဘူမြို့က ဆော်ဒီသံရုံးကိုစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားယူဖို့ သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲသလို သွားရောက်ခဲ့ရာမှာသတ်ဖြတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ခုတ်ပိုင်းအစဖျောက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။သူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို လုံးဝရှာမရခဲ့ပါဘူး။
အစပိုင်းမှာ ဆော်ဒီအာရေးဗျ တာဝန်ရှိသူတွေက ဂျမားဟာရှော့ဂီဟာသံရုံးကနေ ပြန်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အစပိုင်းရက်တွေ အတွင်းမှာ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို သတ်ဖြတ်ပုံအသေးစိတ်ကို သိလာရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တကမ္ဘာလုံးအံ့သြတုန်လှုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာတစောင်က ဆော်ဒီထိပ်တန်းအရာရှိတွေနဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းသားတို့ သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ကြောင်း ယုံကြည်လောက်တဲ့ အထောက်အထားတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့မင်းသားကတော့ သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ သူနဲ့ ဘာမှ မပတ်သက်ခဲ့ဘူးလို့ ငြင်းဆန်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူဟာ ဆော်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့ တသီးပုဂ္ဂလိက ဆောင်ရွက်ချက်ပင်ဖြစ်စေကာမူ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူပါတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မိသားစုရဲ့ခွင့်လွှတ်စကားကို ဟာရှော့ဂီရဲ့ ဇနီးလောင်းပယ်ချ